Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ na mgbawa ụgbọ ala Russia
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mgbawa dị ike mere mgbe ndị njem nọ na bọs na nkwụsị ụgbọ ala n'akụkụ nnukwu ụlọ ahịa.
Ihe dị ka mmadụ 30 nọ n'ụgbọ ala n'oge mgbawa ahụ.
Ihe mgbawa ahụ mere mgbe ndị njem nọ na bọs.
Mgbawa mere na nkwụsị bọs site na etiti ụlọ ahịa.
Ihe mgbawa ahụ mere na etiti obodo Voronezh na mgbede Tọzdee
Ụgbọ ala ndị njem agbawaala n'obodo Voronezh nke dị na etiti Rọshịa.
Ihe onyonyo na -apụta ebe ihe mgbawa ahụ na -egosi ụgbọ ala gbawara.
Ihe onyonyo na -ekesa n'Ịntanet na -egosi bọmbụ ahụ mebiri nke ukwuu, ebe akụkụ ahụ ya na elu ụlọ gbawara.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara si kwuo, ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ na mgbawa ahụ.
Ihe mgbawa ahụ mere na etiti obodo Voronezh na mgbede Tọzdee.
Ihe dị ka mmadụ iri atọ nọ n'ụgbọ ala n'oge mgbawa ahụ, onye ọkwọ ụgbọ ala, onye lanarịrị mgbawa ahụ, gwara ndị mgbasa ozi mpaghara.
Dịkarịa ala, mmadụ 12 merụrụ ahụ na mgbawa ahụ, gụnyere otu nwanyị nke agbawara ụkwụ ya, ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara kwuru, na -ehota isi mmalite.
Onye osote gọvanọ mpaghara Voronezh gwara ndị mgbasa ozi na iyi ọha egwu esoghị na nsụgharị nke ndị ọchịchị tụlere n'oge nyocha a.